25 matipi ekufamba kuenda kuCuba | Absolut Kufamba
25 matipi ekufamba kuenda kuCuba
Alberto Makumbo | | Kiyuba
Migwagwa yeTrinidad. © AlbertoLegs
Zvakawanda zvataurwa pamusoro peCuba, vagari vayo, mavara eOld Havana, mahombekombe ayo, nehurongwa hwezvematongerwo enyika. Kunge chero imwe nzvimbo yepasirese pasirese, chitsuwa chikuru muCaribbean chinozviisa pasi pemimwe misoro (zvimwe ichokwadi, zvimwe kwete) izvo zvatinogona kungobvarura kana tichifamba nemunyika yayo inofadza. Nechikonzero ichocho, izvi zvinotevera 25 matipi ekufamba kuenda kuCuba Vachave vekubatsira kukuru kana zvasvika pakupinda kuchitsuwa cheRum, iyo Malecón uye, kunyanya, vanhu vakanaka.
1 Ronga rwendo
2 Mari muCuba
3 Kugara muCuba
4 Kuenda kutenderera Cuba
5 Idya mucuba
6 Shamwaridzana nevaCuba
7 Indaneti muCuba
Zvinyorwa zvinodiwa zvekuenda kuCuba Izvi zvinotevera: vhiza (unogona kuiwana kuInternet Tours agency ye22 euros), inishuwarenzi yekurapa yekufamba (havakumbire kuairport, asi inodikanwa neHurumende), matikiti ekutenderera uye, hongu , pasipoti.
Mishonga yekudzivirira zvirwere haina kukosha kuti uende kuCuba kunze kwekunge wauya kunobva kune yero fever fever.
Tora magirazi ezuva uye sunscreen uende nawo, nekuti kuCuba kunogara kuchipisa. Kana iwe ukafamba pakati paZvita naApril, edza kuunza chimwe chinhu chine kudziya, nekuti inguva yenguva inotonhora uye inogona kunge iri zuva rinonaya kana kutonhorera husiku. Zhizha ravo rinongopisa sesu.
Nyaya yemari pachitsuwa cheCuba inokodzera kupihwa posvo, kunyanya nekuda kwekuti Cuba ine mari mbiri dzakasiyana: iyo CUC (inoshandurwa peso), yevashanyi, uye iyo CUP (Cuban peso), yevagari vemo. Kufunga izvo 1 CUC yakaenzana ne95 euro cents uye 26.5 CUP, mutsauko ndiwo wakanyanya kukosha.
Kunyange zvakadaro munzvimbo zhinji dzevashanyi iwe uchafanirwa kubhadhara neCUCZvinhu zvakaita sekufambisa kwemadhorobha kana maresitorendi ari munzvimbo dzakaperera dzeCuba anotambira uye anotokupa mari kudzoka muCUP.
Kana iwe ukasvika nemadhora kuCuba, komisheni ye10% yeiyo yese inozoiswa kuita shanduko yemari panhandare. Zvirinani kutora maeuro uye chinja zvese kana iwe uchinge wasvika kana kuzviita mune zvidiki diki paImba Yekuchinjana
Mumaguta evashanyi mune maATM maunogona kutora mari mumadhora uye muCUC. Tarisa komisheni nebhangi rako uye kuti iwe ugone kuziva kana uchifanira kubvisa yakawanda kana kuzviita mune zvidiki.
Cuba inodhura here? Zvishoma, kunyanya kana iwe uchifamba wega, nekuti uchagara uchifanira kubhadhara kamuri mbiri mumba mega. Chikafu chakachipa (pizza, nekuda kwechimwe chikonzero, zvakanyanya kudaro), kugona kudya kwe10 CUC pazuva kana uchida. Kana zvasvika pakutenderera, edza kushandisa zvifambiso zveruzhinji senge bhazi kana marori kuti ugone kubhadhara muCuba pesos. Ini ndinokuunzira yakanyanya kujeka uye yakajeka bhajeti munguva pfupi.
KuCuba hakuna mahostele mazhinji uye mahotera, kunyanya sezvo mazhinji emabhizinesi aya anoenderana nemhando dzeUS dzakadai seHostelworld kana Airbnb kuti iwedzere kuoneka. Neraki, kubvira 2016 makambani ese ari maviri akapa mwenje wakasvibira kune vemahotera eCuba avo vaida kunyoresa pawebhusaiti yavo, saka hazvingashamise kana paine dzimwe pekugara dzerudzi urwu pachitsuwa ichi mumwedzi mishoma. Kwandiri, iyo yega hostel muCuba kwandakagara yaive Casa Iraida, munharaunda yeVedado, yakakurudzirwa uye isingadhuri.
Mukushayikwa kwemahotera akakura, nzvimbo dzekugara muCuba dzinodzikiswa kunzvimbo dzinozivikanwa dzekudyira (kunyanya munzvimbo dzemahombekombe nemakiyi) kana dzimba dzinozivikanwa (uye dzakachipa) dzimba dzevanhu vekuCuba, dzimba dzinorendwa nevagari vemo. Yeyakanaka, yakajeka uye hongu, mukana wegoridhe wekudyidzana nevamwe veCuba vanokuitira zvakanaka.
Kana uchikwanisa, chengetera imba yako yekutanga usati waenda kuCuba asi usazvidya moyo pamusoro pekuchengetera iwe kwausina kuita parwendo rwasara. Cuba yakafanana nemhuri hombe uye muridzi wemba yako anogara achiziva zvakati nezvakati kana menganita ine imba yakavanzika mune rimwe guta. Uye chenjera, zvese zvinovimbika, zvinoshanda uye zvakavimbika.
Kana iwe uchizofamba wega kuCuba, haisi iyo nyika yakachipa, sezvandambotaura, uye chikonzero chikuru pekugara. Dzimba dzevamwe hadziwanzo dzive nedzemakamuri ega uye hadzisi kuzokuitira mutengo wekufamba wega. Kazhinji, pekugara kwega kwega kune maviri kana matatu makamuri maviri emitengo iri pakati pe25 CUC uye 35 CUC.
Kuenda kutenderera Cuba
Kana zvasvika pakufamba-famba kuCuba pane zvitatu zvakakosha. Chekutanga uye chinonyanya kushanda cheizvi chingave chekurenda mota kana uchisvika panhandare yendege yeJose Martí. Sarudzo yakanaka yekuchengetedza kana iwe ukafamba vanhu vakati wandei uye uchigovana mari.
Kana iwe ukasarudza bhazi saka unofanirwa kuenda Viazul, iyo huru kambani inogadzirisa nzira pakati penzvimbo huru dzevashanyi muCuba. Mitengo yacho inokwikwidza, ine mabhazi ane mweya wekugadzirisa uye mashedhiyo anowanzo kuremekedzwa, saka inova sarudzo inonyanya kushandiswa nevashanyi pavanogadzira Havana - Viñales kana Trinidad - Santa Clara, semuenzaniso. Neichi chikonzero, kuenda mazuva maviri kana matatu rwendo rwunotevera usati watenga matikiti chichava chakanakisa sarudzo, nekuti vanomhanya nekukurumidza. Unogona kuyedza kuzvitenga online, asi zvirinani hazvina kundishandira panguva iyoyo (nevamwe vafambi vazhinji).
Iyo tekisi yakagovaniswa Inogona kunge iri sarudzo, priori, isingafadzi asi ndiyo inoshanda. Kuzviteshi zveViazul pachavo, vatyairi vematekisi vanopa nzvimbo dzeX tekisi kubva, semuenzaniso, Matanzas kuenda kuHavana, uye votanga nzira kana iine huwandu hwakazara. Matekisi anozadza nekukurumidza (maCuba anowanzovatora) uye mutengo unogona kukwira 2 kana 3 CUC uchienzaniswa nebhazi, asi zvinotsiva kukurumidza nzira. Zvichengete mupfungwa.
Kana zvasvika pakutenderera guta rimwe chete kana kushanyira mahombekombe, sarudzo yakanakisa ndeyekushandisa kutakura kwakafanana neveCuba: mabhazi emumaguta kana anonzi "marori", ayo anowanzoendesa vashandi kubva kuguta rimwe kuenda kune rimwe. Kusiyana nezvazvinogona kuita pakutanga, ese mabhazi nemarori anochengeta nguva, akasununguka uye anogara achigamuchira Cuba pesos, saka kuenda kubva kuMatanzas kuenda kuVaradero kwemasendi mashanu kunopfuura kuita.
Ndinofanira kubvuma kuti chikafu muCuba chave chiri chisina kusimba chiitiko ichi, ini handizive kana chiri nekuda kwekushaikwa kwezvigadzirwa muzvitoro kana kunetsekana kwekutsvaga zvakachipa uye zvakanaka nzvimbo dzakanaka zvakafanana. Kunyangwe zvakadaro, yaive nemubatsiri: mabhureki ayo, e5 CUC, wese muridzi weimba yega anogadzirira. Iwo anowanzo kuve emabiko emabiko akasimba akavakirwa pakofi, mazai, toast, kutonhora kutonhora uye michero, yakanaka kukuita iwe "Cuban brunch" uye uzviponese kubva pakubhadhara kudya. Vanogona zvakare kugadzira sandwiches yekushanya kwako zuva iro.
Maresitorendi evashanyi anowanzo shandira yakawanda pasita, pizza, uye sandwiches. Rotari, kunyangwe dai ndaifanira kukurudzira mamwe maresitorendi ivo vaizotevera: chero muVedado nharaunda muHavana (kunyanya Plan B kana French Alliance Restaurant), La Berenjena, nzvimbo yekudyira vezvirimwa muViñales, kana Jazz Bhawa kubva kuTrinidad, uko kwavanoshumira imwe buffet dhishi rakavakirwa pamupunga, yakakangwa plantain kana yucca yemitengo yakanaka. MuMatanzas kune akawanda anowanzo kuve eCuba mabhawa apo ndiro yemupunga ine yucca, saladi uye yakakangwa plantain inogona kukubhadharira 2 CUC.
Pindai iwo chaiwo madhishi kuravira muCuba dzinonyanya kuzivikanwa ndedzembatya dzekare, mubatanidzwa wevheji nemiriwo, kana maMoor nemaKristu (musanganiswa wemupunga nebhinzi). Ehezve hakuna kushomeka kwemajusi emichero anodziya kwese kwese, michero yakadai seguva, mango kana chinanazi, mupunga wakawanda uye masangweji akafanana nechingwa chine nguruve inoyamwa kana chingwa chine nyama yenyama.
Ndinofanira kubvuma kuti, kuCuba, chinhu chakanakisa chave chekugona kudyidzana nemaCuba nemaitiro avo ehupenyu. Vakapukunyuka avo vakadzidza kurarama nepashoma, avo pese pavanogona vanokubatsira, kuvhura mikova yeimba yavo uye kukukoka kukofi yekugadzira ivo vachikuratidza dambarefu reapikicha. Hongu, zvese zvaive zvechokwadi: maCuba anoshamisa.
ASI kune vamwe zvakare vanozoedza kutora mukana wevashanyi, weiyo chikwama chinofamba icho chingagara chakabiwa chinhu. Zita rake ndiJinetero uye anozivikanwa nekuenda kumashure kwako achikumbira kushanya, tekisi kana imba yakazvimiririra kusvikira yakuburitsa mumabhokisi ako. Ivo vanowanzo vari pazviteshi zvebhazi zveViazul vakamirira vashanyi uye vamwe vanotobhadhara tikiti ravo pakati peguta neguta kuti vakupe chigadzirwa. Zano rangu? Iyo yakananga uye ine hushamwari Nha. VaCuba havasi kuomerera kana iwe ukajekesa kwavari kubva pakutanga kuti iwe haudi chero chinhu.
VaCuba vanotora zvinhu nyore, pasina kushushikana, uye humbowo hwakanaka hweichi ndechekuti tekisi inogona kusazosiya panguva yavakakuudza kana mushandi pachiteshi chebhazi kuti kana achifanira kukumirira paanopedzisa hurukuro yake nemumwe waanoshanda naye, achadaro. Usanetseke.
Mune nzanga yekuMadokero umo isu hatimboshinga kutaura nemunhu watinofamba naye munzira yepasi pevhu kana iye munhu anotanga kutaura newe mumutsara wekuratidzira, kuCuba hukama hwehukama hwakanyanya kuitika. Kumira kuEl Malecón uye kuita kuti mumwe munhu auye kwauri kuti utaure kana kumuridzi wemba yega kuti akupe kofi sechikonzero chekutaura newe kuratidza maCuba anovhura sei maoko avo kune wese munhu, pasina rusaruro, nenzira yechisikigo.
Kana iyo mari yeCuba ichifanirwa nechakasiyana chinyorwa, iyo Internet haisi kure kumashure, kunyanya kana Broadband ichisvika kuCuba kuburikidza netambo kubva kuVenezuela uye chete nzvimbo dzekutandarira uye vakuru vakuru veHurumende vane yavo server. Etecsa ikambani yekutaurirana yeCuba, iyo inogovera makadhi eWi-Fi panzvimbo dzayo kuti ibatanidze neInternet. Kadhi iri rinokosha 1.50 CUC uye rinokutendera iwe kubata awa reInternet kuti udye chero iwe paunoda. Zvakaipa? Kuti iwe uchafanirwa kuita mutsara kwenguva refu kuti utenge kadhi (vamwe vakadzi vanototora basa ravo kuti vafambire mberi) uye mune vamwe vanogona kunge vasina kana kusara.
Paunenge uchishandisa kadhi rako, zvakaringana kuona vanhu vazhinji vaine nharembozha mupaki kana sikwere kuti uzive kuti pane poindi yeWi-Fi ipapo. MuHavana, anosvika makumi matatu neshanu mafirimu akaiswa mumakore maviri apfuura, kunyangwe Etecsa achifunga kuwedzera network mushure mekusaina chibvumirano neGoogle Zvita apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » 25 matipi ekufamba kuenda kuCuba
7 zvirongwa zvekunze muBarcelona